आईसीसी टि २० विश्वकपः विश्वकप एशिया छनोटमा नेपालको पहिलो जीत ! - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 04:13
आईसीसी टि २० विश्वकपः विश्वकप एशिया छनोटमा नेपालको पहिलो जीत !
इनेप्लिज २०७६ साउन ८ गते ८:४० मा प्रकाशित
प्रजित शाक्य,काठमाडौँ, साउन ८ गते । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको कीर्तिमान अर्धशतकको सहयोगमा नेपालले बुधबार मलेसियालाई सात विकेटले हराएर आईसीसी टि२० विश्वकप छनौट (एसिया फाइनल्स)मा पहिलो जित हात पारेको छ ।
एक दिनअघि कतारसँग चार विकेटले स्तब्ध भएपछि टि२० विश्वकपमा चयन हुने अन्तिम खुड्किलो ग्लोबल छनोटमा पुग्न नेपाललाई जित अत्यावश्यक थियो । सो जित नियमित कप्तान पारस खड्काको अनुपस्थितिमा टिमको नेतृत्व सम्हालेका ज्ञानेन्द्रको विस्फोटक पालिले सम्भव भयो ।
सिङगापुरको इन्डियन एसोसिएन ग्राउन्डमा भएको खेल प्रभावित पारेपछि प्रति पालि नौ ओभरको भिडन्त भएको थियो । टस जितेर पहिले नेपालले मलेसियालाई पहिले ब्याटिङ गर्न लगायो । मलेसियाले निर्धारीत नौ ओभरमा सात विकेट गुमाएर ८३ रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य राखेको थियो ।
प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्रले मात्र २१ बलमा ५१ रन बनाएपछि नेपालले छ बल बाँकी छँदै तीन विकेटको क्षतिमा ८६ रन बनाएर लक्ष्य हात पार्यो । टि२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा लगातार कमजोर ब्याटिङ पनि ज्ञानेन्द्र टिममा स्थान नै खतरामा परिसकेको थियो । तर सहि समयमा असाधारण ब्याटिङ गर्दै ज्ञानेन्द्रले आप्mना आलोचकलाई चुप पार्नुभयो । ज्ञानेन्द्रले टि२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बनाएको आप्mनो पहिलो अर्धशतक नेपालको सबभन्दा तेज अर्धशतक भएको छ । उहाँले विनोद भण्डारीले यस महिना मलेसियाविरुद्ध २५ बलमा अर्धशतक बनाएर राखेको कीर्तिमान तोड्नुभएको हो । ज्ञानेन्द्र्रले २० बलमा अर्धशतक बनाउनुभएको हो । ज्ञानेन्द्रको पालिमा पाँच चौका र तीन छक्का सामेल थियो ।
ज्ञानेन्द्रको विस्फोटक पालिले नेपालले पहिलो विकेटमा ३२ बलमै ६६ रनको साझेदारी प्राप्त गरेको थियो । यो पनि नेपालका लागि टि२० अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो विकेटका लागि सर्वाधिक साझेदारी भएको छ । पछिल्लो खेलमा ज्ञानेन्द्र र पारस खड्काले पहिलो विकेटको लागि ४९ रन बनाएर राखेको कीर्तिमान आज भङ्ग भएको हो ।
मलेसियामा बलर मुहम्मद स्याहदातले ज्ञानेन्द्र, प्रदीप ऐरी (१४ बलमा १२ रन) र दिपेन्द्र सिंह ऐरी (४ बलमा २ रन)को विकेट लिएर नेपाललाई नतर्साएको होइन । स्याहदातले ज्ञानेन्द्र र प्रदीपलाई एकै ओभरमा आउट गर्नुभएको हो । तर विनोद भण्डार र शरद भेष्वाकरले थप विकेटको क्षति हुन दिनुभएन । विनोदले छक्का प्रहार गर्दै नेपाललाई जित दिलाउनुभयो । विनोद आठ बलमा १३ र शरद दुई बलमा तीन रनमा अविजित रहनुभयो ।
यसअघि, मलेसियाका सइद अजिजले १५ बलमा ३० रन बनाएपछि मलेसियाको पालि गतिलो बनेको हो । अजिजको पालिमा पाँच चौका र एक छक्का सामेल थियो । वीरुनदिप सिंहले १७ बलमा एक चौका र एक छक्कासहित बनाएको २१ रन मलेसियको पालिमा अर्को उल्लेखलायक ब्याटिङ बन्यो ।
नेपालका तेज बलर सोमपाल कामीले पहिलो ओभरमा नै अनवर अरुदिन र सफिक सरिफलाई रनको खाता पनि खोल्न नदिएर आउट गरेपछि मलेसिया समस्यामा परेको थियो । सोमपालले अमिनुद्दिन राम्ली (५ रन)लाई पनि आउट गरेर सर्वाधिक तीन विकेट लिनुभयो । अन्य विकेटकर्तामा बसन्त रेग्मी (दुई विकेट) तथा सन्दीप लामिछाने र करण केसी (एक÷एक विकेट) हुनुहुन्थ्यो ।
आजको खेलमा ज्ञानेन्द्र मल्ल म्यान अफ दि म्याच बन्नुभयो । नेपालले शनिबार आप्mनो तेस्रो खेल कुवेतविरुद्ध खेल्नेछ ।